Sherpas Cinemas သည် "စိတ်ထဲသို့" ကမ္ဘာလှည့်ခရီးကိုလော့စ်အိန်ဂျလိစ်သို့ရောက်သွားသည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » လမ်းပြရုပ်ရှင်ရုံများ Los Angeles ကို "ဟုစိတ်ထဲသို့" World Tour များရရှိစေ
ကြံရာပါ Media က US မှာ repped ကနေဒါရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရာမှနောက်ဆုံးရအင်္ဂါရပ်, ကိုလည်းတိုကျို, ပဲရစ်, မြူးနစ်မော်စကို, ဗီယင်နာနှင့်ကမ္ဘာအဝှမ်းမှအခြားမြို့များမျက်နှာပြင်မှစီစဉ်ထားသည်။ Los Angeles မြို့- အဆုံးစွန်သောတောင်ပေါ်ကိုတက်နှင့်နှင်းလျှောစီးဖို့အမည်မသိ skier ရဲ့ကြိုးပမ်းမှုနှင့် ပတ်သက်. စိတျ, Sherpa ရုပ်ရှင်ရုံရဲ့အသစ်ရုပ်ရှင်ထဲသို့ [ ... ] ထဲမှာနှစ်ကြိမ်ပြပါလိမ့်မယ်
ယခင်: Crazy မှစ. လုပ်ဆောင်ခြင်းအပေါ်ဘာဘရာ Kopple: အအမွေအနှစ်ရဲ့ခဲအောက်ပါ
နောက်တစ်ခု: 8th နှစ်ပတ်လည် HPA ဆုပေးပွဲတင်ဆက်မှုကြေညာ